स्वास्थ्य-जीवनशैली Archives - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com स्वास्थ्य-जीवनशैली Archives - खबर प्रवाह
क्रमस जाडो बढ्दैछ । जाडोसँग कसरी जुध्ने ? न्यानो कपडा, आगो वा हिटर मात्र काफी छैन । कतिपय खानपानको माध्यामबाट पनि चिसो भगाउन सकिन्छ । चिसोबाट जोगिनको लागि खाइने खाद्यपदार्थहरुमा तातो सुप र झोलयुक्त तरकारीहरु हाम्रो रोजाईमा पर्छन् । तातो सुपहरुको सेवन गरेर हामीले आफ्नो शरीरलाई न्यानो राख्छौं । अझै जाडो महिनामा सुप, तरकारी […]
काठमाडौं । ओखरलाई ब्रेन फूड अर्थात दिमागको खाना भनिन्छ । किनभने यसमा भिटामिन–ई सहित अन्य धेरै आवश्यक पोषक तत्वहरू पाइन्छ । ओखरले हाम्रो दिमाग फिट राख्छ । क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयको एक अनुसन्धानका अनुसार ओखर खानाले दिमाग तेज बनाउनुका साथै एकाग्रता पनि बढाउँदछ । यसले २६ प्रतिशत डिप्रेसनलाई घटाउँन पनि सहयोग गर्दछ । ओखरले […]
एसिड प्रहार गर्नेको सम्पत्ति रोक्का गरी पीडितको उपचार र क्षतिपूर्ति भराउने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एसिड प्रहार गर्नेमाथि अमानवीय र जघन्य अपराधकाे कसुरमा कारवाही गर्न अध्यादेशमार्फत तत्काल नयाँ कानून बनाइने बताउनुभयाे। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री र पीडितसहित सहभागी कार्यक्रममा उनले त्यस्ता अपराधीको सम्पत्ति रोक्का गरी पीडितको उपचार गर्ने र क्षतिपूर्ति भराउने, भरणपोषण गर्ने तथा तिनलाई छिटो अस्पताल पुर्‍याएर उपचार […]
एजेन्सी । पाकेको केराको फाइदाका बारेमा जान्नुभएकै होला, तर के तपाईलाई काँचो केराको फाइदाका बारेमा थाहा छ ? यस्ता छन काँचो केराका फाइदाहरु- तौल घटाउँन सहयोग तौल घटाउँन मन लागेकालाई दैनिक एक काचो केरा खाने सल्लाह दिइन्छ । यसरमा भरपूर मात्रामा पाइने फाइबरले अनावश्यक फ्याट सेल्स र फोहोरलाई सफा गर्न मद्दत गर्छ । कब्जियतको […]
एजेन्सी । गर्मी महिनामा आँप सहज रुपमा पाइन्छ । बच्चादेखि बुढासम्म सबैलाई यो फल मनपर्छ । आँप स्वास्थ्यका लागि पनि राम्रो मान्निछ । तर,केही यस्ता रोगहरु हुन्छन् जसका कारण आँप खानु उचित मानिदैन । कुन रोग लाग्दा आँप खान हुँदैन भन्ने विषयमा यहाँ जानकारी दिइएको छ- १. डायबिटीज जो व्यक्तिहरुलाई डायबिटीजको समस्या छ उनीहरुले […]
एजेन्सी । खानाका परिकारलाई स्वादिष्ट बनाउन खुसार्नीको प्रयोग गर्छौं । त्यसमा नि डल्ले अर्थात अकबरे खुसार्नीलाई विशेष मानिन्छ । डल्ले खुर्सानीको नियमित प्रयोगले ग्यास्ट्रिक तथा अल्सर जस्ता रोगको औषधी समेत हुन्छ । डल्ले खुर्सानीमा पाईने क्याप्सिसिनका कारण रोगीलाई फाईदा पुर्‍याउछ । यो खुर्सानीको नियमित सेवनले रोगहरू निको हुन्छ । त्यसबाहेक डल्ले खुर्सानीका निम्न फाइदाहरु रहेका […]
‘पर्फेक्ट जोडी’ चाहानुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी ९ उपाय
साचो प्रेम पाउन मानिस के के सम्म गर्छन् । तर पनि अधिकांश प्रेमीप्रेमिकाबीच प्रेम टिक्न सक्दैन । कतिपय यसलाई आफ्नो भाग्य मान्दछन् भने केहीले एकअर्कालाई दोषारोपण गर्छन् । किन मानिसले साचो प्रेम पाउन सक्दैनन् त ? कहिल्यै तपाईले यसबारे जान्ने कोशिस गर्नु भएको छ । साचो प्रेम पाउन ज्योतिषीय योगको समेत ठूलै भुमिका रहने ज्योतिष […]
भिण्डीका फाइदा : चाउरीपना हटाउनेदेखि मुटुसम्बन्धी रोग नियन्त्रणसम्म
काठमाडौं । भिण्डी के हो ? सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । यो तरकारीका रुपमा सबैले प्रयोग गरेका हुन्छ । कतिपय मानिसलाई भिण्डी मनपरे पनि केहीले यसको तरकारी मनपराउँदैनन् । तर यसको विशेषता जान्ने र बुझ्नेले भने सही तरिकाले प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । आज हामीले भिण्डीको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा पुर्‍याउने विवध फाइदाका विषयमा जानकारी दिएका […]
‘स्टामिना’ कम भएर थकित महसूस गर्नुहुन्छ ? यी खानेकुरा खानुस्
अहिलेको व्यस्त जीवनमा काम गर्न उत्तिकै शक्तिको आवश्यकता पर्छ । अझ कतिपय मान्छे त एक‍ैछिन काम गर्दा पनि थाकिहाल्छन् । किनकि, उनीहरूसँग पर्याप्त शक्ति हुँदैन । स्टामिनाको कमीले यस्तो हुने गर्छ । शरीरलाई चाहिने स्टामिना बढाउनका लागि कार्बोहाइड्रेट्स, भिटामिन सी, प्रोटीन र आइरन जस्ता तत्व चाहिन्छ । यी तत्वले तपाईंलाई दिनभरि तन्दुरुस्त राख्न मद्दत गर्छ […]
दूध चिया किन हानिकारक ? यस्ता छन् कारण
दूध चियाको सौखिन हुनुहुन्छ भने सर्तक रहनुहोस् किनकि चियामा दूध मिसाएर पिउँदा त्यसाको लाभ नष्ट भएर जाने गर्दछ । दूध चियाको सेवनले तपाईको स्वास्थ्यमा कैयौं प्रकारको हानी समेत पुर्‍याउने गर्दछ । तर बिना दूधको चिया अर्थात कालो चिया तपाईको मुटु र स्वास्थ्यलाई फाइदाजनक हुन्छ । तर्सथ दूध चियाको चुस्किमा रमाउने लत लागेको भए पनि कालो […]
हरियो खुर्सानी भिजाएको पानी पिउँदा स्वास्थ्यमा पुग्छ यस्तो फाइदा
एजेन्सी- हरियो खुर्सानी प्रत्येकको भान्सामा प्रयोग गरिन्छ । धेरै मान्छेहरू खानासँग हरियो खुर्सानी खान रुचाउँछन् । यसले खानामा स्वाद मात्र ल्याउँदैन, ठिक मात्रा खाने हो भने हरियो खुर्सानीले मानव स्वास्थ्यमा अनेकौं फाइदा पुर्‍याउँछ । हरियो खुर्सानीमा भिटामिन बी ६, भिटामिन ए, आइरन, कपर र पोटासियम हुन्छ । हरियो खुर्सानीमा कतिपय औषधीय गुण पनि हुन्छ । […]
पेटको बोसो घटाउनु छ भने आजैबाट खान थाल्नुस् यी खानेकुरा
अव्यवस्थित जीवनशैली, अस्वस्थ खानपान, स्वास्थ्य भन्दा स्वादलाई प्रथामिकता लगाएत कारणले अहिले थुप्रै मानिसको समस्या बनेको छ पेट लाग्नु । अनावश्यक पुल्टुक्क निस्कने पेटले मानिसको शरीर भद्दा त देखिन्छ नै, विभिन्न रोगको जोखिम समेत बढाउँछ । कसरी घटाउने त पेटको बोसो । एजेन्सीहरुले पेटको बोसो घटाउन निम्न लिखित खानेकुरा खान सुझाव दिएका छन् । लसुनः […]
कसरी सर्वाधिक धनी बने बेजोस
विश्वको एक नम्बर अनलाईन सपिङ अमेजनका संस्थापक र सीईओ जेफ बेजोस विश्वका सबैभन्दा धनी मानिस हुन् । यो बिषयको जानकारी कतिपयलाई थाहा हुनसक्छ तर उनीहरुको सम्पतीको रेकर्डबारे तपाईंलाई जानकारी छ ? अमेजनका संस्थापक जेफ बेजोस रेकर्ड बनाउनमा चर्चित बनिसकेका छन् । कहिले उनको चर्चा डिर्भोसपछि श्रीमतीलाई अमेजनको ठुलो हिस्सा दिएकोमा बन्यो त कहिले लकडाउनमा सबैभन्दा […]
यी हुन् विश्वकी सबैभन्दा ‘क्युट’ बालिका, तीन वर्षको उमेरमै मोडलिङ
तीन वर्षकी एक बालिका यतिबेला सामाजिक सञ्जालहरुमा चर्चामा छिन् । उनी चर्चामा हुनेको खास कारण उनको ‘क्युटनेश’ हो । उनी निकै मायालाग्दी र राम्री पनि देखिन्छिन् । उनको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा देखेपछि एकछिन नहेर्ने कम मात्र होलान् । इजरायलकी एनाहिता हासेमजादे अहिले ३ वर्षकी भइन् । तीन वर्षकी यी सानी नानी यतिवेला मोडलिङका कारण चर्चामा […]
ज्ञान लिन उमेरले छेक्दैन
फ्रान्सिस वेलेन्ड पार्कर अमेरिकाका एक प्रसिद्ध शिक्षाविद् थिए । बालबालिकाको शिक्षा सम्बन्धमा उनको योगदान निकै ठूलो थियो । निकै टाढा-टाढाबाट बालबालिकाको शिक्षाका सम्बन्धमा राय-सल्लाह लिन उनीकहाँ मानिसको भिड लाग्ने गथ्र्यो । उनी पनि सकेसम्म सहज तरिकाबाट सबै जिज्ञासुको जिज्ञासा शान्त बनाएर पठाउने गर्थे । एकपटक शिक्षाविद् पार्कर कुनै एक स्थानमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा बालशिक्षाबारे आफ्नो […]
पायल्स निको पार्न अपनाउनुस् यस्ता घरेलु विधि
पायल्स रोगका बिरामीहरु दिन प्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा छन् । दैनिक खानपानमा ध्यान नदिँदा यस्तो रोगको जोखिम झन बढ्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । कब्जियत नै पायल्सको मुल कारण हो । जब कब्जियत हुन्छ, दिसा गर्दा बल पर्छ । त्यही बलले भित्रका रक्तशिरालाई तन्काइ दिन्छ । यो क्रमस फैलन थाल्छ र गिर्खा बन्न थाल्छ । पायल्सका कारण मलद्वार […]
स्वास्थ्य-जीवनशैली मृगौलाको पत्थरी हुँदा के के नखाने?
समाचार सावधान ! जाडो याममा भुलेर पनि नगर्नुहोस् यस्ता ८ काम
समाचार यी ७ कुरा जो महिलाले फिटिक्कै खोल्दैनन्